ikhaya / Ngaba ndiyamfuna igqwetha lokuLawula okanye ukuFaka uLwazi?
Ngokuqinisekileyo kufanele ukuba unayo igqwetha ukuba uza kudiza nantoni na, ngakumbi ukuba uneshishini lokuthengisa izindlu nomhlaba. Ukuba kukho ukungavisisani phakathi kweendlalifa, ngokuqinisekileyo ufuna ukuba negqwetha kunye nawe. Ukuba ityala ligqitha ngaphezulu kwemali onayo, ngokuqinisekileyo kuya kufuneka ukuba ube negqwetha kuba umlawuli unakho ukuba kuloo nto ayibambayo. Kukho indlela ethe ngqo yokusasaza imali xa iimali onazo zingaphantsi kwabababolekayo. Ukuba unepropathi enkulu enee-asethi ezibalulekileyo ezibangela ukuba kukhululwe irhafu yokuthenga okanye irhafu, kuya kufuneka ukuba unegqwetha kwaye mhlawumbi ube ngumcwangcisi zincwadi.
Singakuthintela Njani Ukukhangela ukuFunda?
Eyona ndlela ilungileyo yokuthintela ukumangalelwa kwilungelo lokufumana umhlaba kukuba nesicwangciso sokungenisa umoya esiquka ukubathemba okanye ukudityaniswa kwetrasti, umyolelo, amandla egqwetha, kunye nesikhokelo sezempilo. Kuya kufuneka uthathe ingqalelo konke ukubonwa kwabaxhamlayo kwiiakhawunti zakho, ngokunjalo. Ndithetha nabathengi malunga nokucwangciswa kwempahla xa iyonke.
Ngaba Izigqibo ezenziwa nguMgwebi oGwetyiweyo ziyaKhutshelwa?
Nasiphi na isigqibo esenziwe kwinqanaba lenkundla yetyala singasiwa kwicandelo lokubhena
Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi Isidingo seGqwetha lokuNgeniswa kweMpahla, i iseshoni yesicwangciso sobuchule lelona nyathelo lakho lilandelayo. Fumana ulwazi kunye neempendulo zomthetho ozifunayo ngokufowuna (973) 200-1111 namhlanje.